အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခပြောပြခဲ့တဲ့ ဂဏန်းဗေဒင် - DHN NEWS
မူလဂဏန်း (၁) ရတဲ့ လူဟာ အသားအရည်က ဖြူဖတ်ဖြူရော် ရှိတတ် တယ်ကွ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်က ကြံ့ခိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ရှိတယ်ကွ။ ဆံပင်တို့ ဘာတို့ကတော့ အများအားဖြင့် အမည်းရောင် ဖြစ်လေ့ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ လူအများစုနဲ့ မနေဘဲ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ နေတတ်တယ်ကွ။
နောက်တစ်ခုကတော့ (၁)ဂဏန်းသမားဟာ လူတွေကို မယုံဘူး။ အမြဲတမ်း သံသယ ရှိနေတတ်တယ်။ တော်တော်များများ (၁)ဂဏန်းသမားတွေက အာဏာပြတာတို့ အမိန့်ပေးတာတို့ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အသစ်အဆန်းကို ဖန်တီး လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ဥဉ်လဲရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမှာပဲ မွေးမွေး ၁-ရက် ၁၀-ရက် ၁၉-ရက် ၂၈-ရက်တွေမှာ မွေးရင် ဂဏန်းဗေဒင် သဘောအရ ၁-ဂဏန်းသမားလို့ ပြောရမှာပဲ။ ၁- ဂဏန်းသမားဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်တော့ ကြီးတတ်တယ်ကွ။ ဘယ်လို အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် ၁-ဂဏန်းသမားဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမြင့်ကို ရောက်သွားတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ၁-ဂဏန်းသမားအတွက် အဆောင်ဟာ ရွှေပဲကွ။
ရွှေကို ဆောင်ထားရင် ကံကောင်းတယ်လို့ ရှေးက ဆရာတွေက ယုံကြည်ကြတယ်။
အရောင်ဆိုရင်တော့ အ၀ါရောင်တို့ ၊ ရွှေရောင်တွေဟာ ၁-ဂဏန်းသမားနဲ့ သင့်မြတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျောက်မျက် ရတနာထဲက ဆိုရင်တော့ ပယင်းတို့ ဥဿဖယားတို့ စိန်တို့ဟာ ၁-ဂဏန်းသမား ဆောင်သင့်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာပဲ။
ပြီးတော့ အရေးကြီးတဲ့ ၁-ဂဏန်းသမားအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရင် ဘယ်လမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် (၁) (၂) (၄) (၇) (၁၀) (၁၁) (၁၃) (၁၆) (၁၉) (၂၀) (၂၂) (၂၅) (၂၈) (၂၉) (၃၁) ရက်တွေဟာ သင့်မြတ်တဲ့ ရက်တွေပဲကွ။
ပြီးတော့ ၁-ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော နှင့် ပါတ်သက်သောရောဂါ ၊ သွေးလေ မမှန်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ကွ။
၁-ဂဏန်းသမားအတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးကတော့ ပျားရည်ပဲဟေ့။ ပျားရည်ကို စားပွဲ ဇွန်းကြီးနဲ့ ညအိပ်ယာဝင် တစ်ဇွန်း တစ်ဇွန်း သောက်သင့်တယ်ကွ….
ဒါကတော့ အဘမင်းသိင်္ခ ပြောပြတဲ့ (၁)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
၃-ရက်နေ့ဖွားဆိုရင် ၃-ဂဏန်းသမားပေါ့။ ၅-ရက်နေ့ဖွားဆိုရင် ၅-ဂဏန်းသမားပေါ့။
နှလုံးဆိုရင်တော့ တစ်လုံးထဲရအောင် ပေါင်းရမယ်။ ဥပမာ ၁၂-ရက်နေ့ ဆိုရင် ၁-နှင့် ၂ ပေါင်းတော့ ၃-ရတယ်။ အဲဒီတော့ ၃-ဂဏန်း သမားပေါ့။
ဒီလိုရှိတယ်ကွ…။ အင်္ဂလိပ်လရဲ့ ဘယ်လမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၂-ရက်၊ ၁၁-ရက်၊ ၂၀-ရက် ၊ ၂၉-ရက်တွေမှာ မွေးတဲ့ လူတွေကို ဂဏန်းဗေဒင် ပညာအရ ၂- ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်ရမှာပဲ။ ဒီလူတွေဟာ အနုပညာဘက်မှာ ချွန်တတ်တယ်။ စိတ်နေစိတ်ထား သိမ်မွေ့တတ်တယ်။ အတွေးအခေါ် စိတ်ကူး ကောင်းတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့တော့ နှောင့်နှေးတတ်တယ်။ ခရီးသွား ရတဲ့ အလုပ်တွေမှာလည်း အောင်မြင် တတ်တယ်။ ခရီးတောင်မှ ရေလမ်းခရီးနဲ့ ကုန်းလမ်းခရီး မတူဘူး။ ရေလမ်းခရီးကို ပိုပြီး နှစ်သက်တတ်တယ်။ သူတို့ ရုပ်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိသာတာက မျက်နှာဝိုင်းပြီး မျက်ခုံး မျက်လုံး ကောင်းတတ်တယ်။ ခြေဆံ လက်ဆံ ရှည်တတ်တယ်။
စကားပြောတဲ့အခါမှာ ပါးစပ်တစ်ခုတည်းက ပြောတတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ရော မျက်လုံးရော မျက်ခုံးရောပါအောင် ပြောတတ်တယ်။
၂-ဂဏန်းသမားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမဆို ၂-ရက် (၇)ရက် ၊ (၁၁)ရက် (၂၀)ရက် (၂၅)ရက် (၂၉)ရက် စတာတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ၂-ဂဏန်းဖြစ်နေတဲ့ ရက်တွေ ၇-ဂဏန်းဖြစ်နေတဲ့ ရက်တွေမှာလုပ်သင့်တယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၆-ရက်ကို ပေါင်းလိုက်ရင် ၇-ကျနေပေမယ့်အသုံး မပြုသင့်ဘူး။ ရှောင်သင့်တယ်။
ဘယ်လမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၃-ရက်၊ ၁၂-ရက် ၊ ၂၁-ရက် ၊ ၃၀-ရက်တွေမှာ မွေးရင်တော့ အဲဒီလူကို ၃-ဂဏန်း သမားလို့ ခေါ်ရမှာပဲ။ သူတို့က မျက်နှာ သွယ် တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရင် အစဉ်သဖြင့် အေးအေး ဆေးဆေး ရှိတတ် ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုနေရာကို ရောက်ရောက် အဆင်ပြေအောင် နေထိုင်တတ်ကြတယ်။ သဘာဝ မကျအောင် ထုပ်ထားတဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေကို တလေးတစား လိုက်နာကြတယ်။ အလုပ် ၀တ္တရား ကိုလည်း အလွန် ရိုသေ တတ်ကြတယ်။
သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အရောင် တွေကတော့ ခရမ်းရောင် ၊ မရမ်းရောင် ။ ပန်းနုရောင်တွေ ဖြစ်တယ်။
ကျောက်မျက် ရတနာ ထဲမှာဆိုရင် ဂေါ်မုတ် ကျောက်ဟာ ၃-ဂဏန်းသမားနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ကျောက်ပဲ။
၃-ဂဏန်း သမားတွေ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ရက်တွေကတော့ အင်္ဂလိပ်လရဲ့ ၃-ရက် ၊ ၁၂-ရက် ၊ ၂၁-ရက်တွေဟာ ပထမတန်းစား ကံကောင်းတဲ့ နေ့တွေပဲ။ ၆-ရက် ၊ ၁၅-ရက် ၊ ၂၄-ရက်တွေဟာ ဒုတိယတန်းစား ကံကောင်းတဲ့ နေ့တွေပါပဲ။
၉-ရက် ။ ၁၈-ရက် ။ ၂၇-ရက်တွေဟာ တတိယတန်းစား ကံကောင်းတဲ့နေ့တွေပါပဲ။
၃-ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့ ဦးခေါင်းပိုင်းမှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ အကြောရောင် ရော၈ါ ၊ အကြောတက်ရောဂါ ၊ ဖြစ်တတ်တယ်။
သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်စာကတော့ နာနတ်သီး ဖြစ်တယ်။ ဒုတိယ သင့်တော်တာ ကတော့ ဆီးဖြူ သီးဖြစ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၃-ဂဏန်း သမားတွေဟာ နာနတ်သီး တစ်လှည့် ဇီးဖြူသီး တစ်လှည့် မှန်မှန်ကြီး စားစား ပေးသွားဖို့ လိုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လရဲ့ ဘယ်လမဆို ၄-ရက်၊ ၁၃-ရက်၊ ၂၂-ရက်၊ ၃၁-ရက်နေ့တွေမှာ မွေးရင် ၄-ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်ရမယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ တစ်ခြားသူ နဲ့ မတူပဲ တမူ ထူးခြားနေတယ်။ ထက်ထက်မြက်မြက် ရှိတဲ့ မျက်နှာမိ်ျုး ရှိတယ်။ ၄-ဂဏန်းသမားတွေဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ မိတ်ဖွဲ့လို့ မရဘူး။
တစ်နည်း တစ်ဖုံ ခွတီးခွကျ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အများတကာနဲ့လည်း အယူအဆချင်း မတူပဲ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ကွာဟနေတတ်တယ်။ စည်းကမ်းတွေ အမိန့်တွေကို မနာခံ တတ်ဘူး။ (၄)-ဂဏန်း သမားတွေဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ရတနာပုံ ဆိုက်သလို ကြီးပွား တတ်တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ရှိရင်လည်း အနည်းစုပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီ အနည်းစုကလည်း သူ့အပေါ် အင်မတန် သစ္စာရှိတဲ့ လူတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
(၄)-ဂဏန်းသမားတွေ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ၄-ရက် ။ ၁၃-ရက်။ ၂၂-ရက် ၃၁-ရက်တွေဟာ အကောင်းဆုံးပဲ။
သူတို့အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင်ကတော့ စပ်ထားတဲ့အရောင် ။ မီးခိုရောင် ၊ ညိုမှိုင်းတဲ့အရောင်တွေ ဖြစ်တယ်။
၀တ်ဆင်သင့်တဲ့ ရတနာကတော့ နီလာပေါ့ကွာ။
ပြီးတော့ (၄)-ဂဏန်းသမားတွေဟာ ရောဂါဆန်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ မမြင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ အနာဖြစ် တတ်တယ်ကွ။
ရောဂါ ဖြစ်လာရင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို အသုံးပြုပြီး ကုသတဲ့ ကုသနည်းဟာ အထူးကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခုက (၄)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဆေးစားခြင်း ဆေးသောက်ခြင်းထက် အချိန် လုံလုံလောက်လောက် အနားယူလိုက်ခြင်းဟာ ကောင်းတယ်။ ၄-ဂဏန်းသမား နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တဲ့အခါ သတ်သတ်လွတ် စားလိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်း သွားတတ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမဆို (၅)ရက် ၊(၁၄)ရက် ၊ (၂၃)ရက် ၊ တစ်ရက်ရက်မှာ မွေး ရင် ဂဏန်းဗေဒင် ပညာအရ (၅)ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်ရမှာပဲ။ (၅)ဂဏန်း သမားရဲ့ မျက်နှာ သွင်ပြင်ကတော့ အစဉ်သဖြင့် ပြုံးရွှင် နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်နေ စိတ်ထားကိုပြောရရင် အလွန် လှုပ်ရှားလွယ်တယ်။ ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းတဲ့ အခါ လောင်းကစားဆန်ဆန် လျှေက်လှမ်းတတ်ပါတယ်။
လောင်းကစားသမား လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ စွန့်စားတာကို ပြောတာ။ အဆုံးအဖြတ် မြန်တယ်။ ဆင်းဆင်းရဲရဲ မနေရတတ်ဘူး။ လက်ဖျားမှာ ငွေသီးနေတဲ့ လူတွေဟာ များ သောအားဖြင့် (၅)ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေလည်း မမြဲဘူး။
(၅)ဂဏန်း သမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရော၈ါကတော့ အကြောတက်တဲ့ ရောဂါနဲ့ အာရုံကြောနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ပဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
ဂဏန်းဗေဒင် စာအုပ်မှာတော့ ဓာတ်စာတွေ အများကြီး ပြထားပါတယ်။ (၅)ဂဏန်းသမား အတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ ဓာတ်စာကတော့ မုန်လာဥပဲ။ မုန်လာဥကို များများ စားပေးပါ။ (၅)ဂဏန်းသမားနဲ့ အလွန်တည့်ပါတယ်။
သင့်မြတ်တဲ့ အရောင်ကတော့ အဖြူရောင်နဲ့ ထုံးကျောက်ရောင် လိုဟာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မြတ်တဲ့ ရတနာကတော့ စိန်နဲ့ ပလက်တီနမ် ဖြစ်တယ်။
(၅)ဂဏန်းသမားတွေ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်စရာ ရှိရင် ဘယ်လဆို (5,14,23, 1,10, 19,28, 7,16, 25) ရက်တွေမှာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အကျိုးပေးပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမဆို ၆-ရက် ၁၅-ရက် ၂၄-ရက် တစ်ရက်ရက်မှာ မွေးရင်(၆)ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်နိုင်တယ်။ ၆- ဂဏန်း သမားရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မျက်နှာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘ၀မှာ အချစ်ရေးကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးကြောင့် လွမ်းဆွေးရတာတွေ တွေ့ရတတ်တယ်။ အလှအပ ကို နှစ်သက်တတ်တယ်။
တေးဂီတ ပန်းချီ ပန်းပု စတာတွေကို နှစ်သက် တတ်တယ်။ လေးစားတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အနုပညာကို ခံစားတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ သင့်တင့်တဲ့ အရောင်တွေကတော့ အပြာရောင် အမျိုးမျိုးဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ။ သင့်မြတ်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာကတော့ မြဟာ အသင့်မြတ်ဆုံးပါပဲ။
၆-ဂဏန်း သမားတွေ အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါကတော့ ခေါင်းမူးရောဂါ ၊ နှခေါင်းသွေးလျှံတဲ့ ရောဂါ ၊ အဆုတ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ွ၆-ဏန်းသမားအတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်စာကတော့ ပဲသီးတောင့်ပဲ။
၆-ဂဏန်း သမားအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်စရာရှိရင် (၆၊ ၁၅၊ ၂၄)ရက်တွေဟာ ပထမတန်းစား ကောင်းတယ်။ (၉၊၁၈၊၂၇)ရက်တွေဟာ ဒုတိယတန်းစား ကောင်းတယ်။ (၃ ၊ ၁၂ ၊ ၂၁)ရက်တွေဟာ တတိယတန်းစား အကျိုးပေးတယ်။
အင်္ဂလိပ်ရက် ( 7,16,25) ရက်မှာ မွေးထားရင် (၇)ဂဏန်း သမားလို့ ပြောရမှာ ပေါ့။ (၇)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ ပုံပန်းကတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင် နေထိုင်လေ့ ရှိတယ်။ မသိရင် စိတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့တောင် ထင်ရတယ်။ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စကို ယုံကြည်တယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင် စားတတ်တယ်။
ခရီးထွက်ခြင်းမှာ မွေ့လျှော်တတ်တယ်။ ဘာသာရေးမှာ အများသူငါနှင့် မတူပဲ သူ့ ဘာသာသူ တွေးခေါ်ထားတဲ့ ဘာသာရေးမျိူးတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အော်ကာတစ်ဇင်လို့ ခေါ်တဲ့ လောကီပညာကို လိုက်စား တတ်တယ်။
(၇)ဂဏန်းသမားတွေ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိရင်တော့ (၇)ရက်နဲ့ (၂၅)ရက်ဟာ ပထမတန်း ကောင်းတယ်။
(၂)ရက် (၁၁)-ရက် (၂၀)-ရက်တွေဟာ ဒုတိယတန်းစား ကောင်းတယ်။ အဲဒီရက်တွေမှာ လုပ်ပေတော့။
သူတို့အတွက် ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင်တွေကတော့ အစိမ်းရောင် အဖြူရောင်နဲ့ ညိူမှိုင်းတဲ့ အရောင်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။
သူတို့အတွက် ကံကောင်းစေတဲ့ ရတနာကတော့ ပုလဲကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
(၇)ဂဏန်း သမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါကတော့ အလုပ်ဒဏ် ပိတဲ့ ရောဂါ ၊ ခါးအောက်ပိုင်း အကြောတွေ ဆွဲတဲ့ရောဂါ ၊ သွေးစုနာလို အနာကလေးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့အတွက် သင့်မြတ်တဲ့ ဓာတ်စာ ကတော့ အရည်ရွမ်းတဲ့ အသီးအရွက်တွေ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် သင်္ဘောသီးဟာ အသင့်မြတ်ဆုံးပါပဲ။
ဘယ်လမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လရဲ့ (8 ,17 26) ရက်တွေမှာ မွေးတဲ့ သူတွေကို (၈)ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်တယ်ကွ။ ၂၆-ဆိုတာလည်း ၂-နဲ ၆-ပေါင်းလိုက်ရင် ၈- မဟုတ်လားကွာ။ (8) ဂဏန်းသမားတွေဟာ စကားပြော ပွင့်လင်းတယ်ကွာ။ အလုပ် လုပ်စရာရှိရင်လည်း အလုပ်ကို ဖိလုပ်တယ်။ နားစရာ ရှိရင်လည်း ကျကျ နန နားတယ်ကွာ။ ပြောစရာရှိရင်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမနာတတ်ဘူး။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတော့တာပဲ။ သူ့အတိုင်းကတော့ ညစ်လေ့ မရှိဘူးကွ။ သူတစ်ပါးက ညစ်ပြီဆိုရင်လည်း ၈-ဂဏန်းသမားဟာ ပြန်ပြီး ညစ်တတ်တယ်။ ၈-ဂဏန်းသမား ညစ်ရင် ဘယ်လို လူမျိုးမှ လိုက်လို့ မမှီဘူးလေ။ အဲဒီမှာ တစ်ခု ထူးခြားတာကတော့ ၈-ဂဏန်းသမားဟာ ကံဇာတာ ညံ့ရင်လည်း အလွန် ညံ့တတ်တယ်ကွ။
ကောင်းရင်လည်း အလွန် ကောင်းတတ် တယ်။ လူကလည်း တစ်ဖက်စွန်းပဲကွ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရု မစိုက်တတ်ဘဲ အလုပ်တစ်ခုကို စမိပြီဆိုရင် ပြီးအောင် ဇွဲနဲ့ လုပ်တာ ၈-ဂဏန်း သမားတွေပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ အကြောင်းမဲ့ လောကကြီးကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေ တာ ၈-ဂဏန်း သမားတွေပဲ။
၈-ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါကတော့ အသည်းရောဂါ ၊ သွေးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေပဲ။ သူရဲ့ ဓာတ်စာတွေကတော့ အသီးအရွက်တွေ မုန်လာဥတွေ ငှက်ပျောသီးတွေဟာ သူရဲ့ ဓာတ်စာတွေပဲကွ။
ဆောင်ရမယ့် ကျောက်ကတော့ ပုလဲနက် စိန်နက် မဟူရာ စတဲ့ အနက်ရောင်ကျောက်တွေပဲ။
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင်အရောင်ကလည်း ခရမ်းရင့်ရောင် အပြာရင့်ရောင် အထူးသဖြင့် အနက်ရောင် ပေါ့ကွာ။
ကံကောင်းစေတဲ့ နေ့ကတော့ စနေနေ့ပဲဟေ့။ လောကီပညာ လိုက်စားရင် ၈-ဂဏန်းသမားတွေဟာ ထွန်းပေါက် တတ်တယ်။
မှတ်ချက်-ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရိုကမူ ၁၇-ကို ၈-ဂဏန်းဟု မယူဆပဲ ၈-ထက် ၆ရဲ့ အာနိသင်က ပိုတယ်ဟု ယူဆပါကြောင်း
အင်္ဂလိပ်လရဲ့ (9 , 18 , 27) ရက်တွေမှာ မွေးတဲ့ လူတွေကို ၉-ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်တယ်။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ သူများပေးတဲ့ ငွေတစ်ဆယ်ကို မမက်ဘူး ကွ။ ကိုယ်တိုင်ရှာတဲ့ ငွေတစ်ဆယ်ကို မြတ်နိုးတယ်။ ဘယ်ကိစ္စကို မဆို ကွယ်ရာ မှာ တစ်မျိုး ရှေ့တင်မှာ တစ်မျိုး မလုပ်တတ်ဘူးကွ။
အဲဒါကြောင့် ၉-ဂဏန်း သ မားတွေဟာ ရန်သူများတတ်တယ်။ တွဲလို့ ရရင်တွဲ။ တွဲလို့ မရရင် ကွဲ။ ပြတ်ပြတ် သားသားရှိတာ ၉-ဂဏန်းသမားတွေကွ။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ မကြာခဏ လောကကြီးကို စိတ်ကုန်တတ်တယ်။ အဲဒီလို စိတ်ကုန်ပေမယ့် ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ မယ်သီလရှင် ၊ ဘုန်းကြီး ၀တ်တာ နည်းတယ်ကွ။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ အတိုက်အခိုက် ဘယ်လောက်များများ နောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင် သွားတယ်။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ သူတို့က မသိလို့ကွ။
ကြီးပွားချမ်းသာစေတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး မွေးရာပါ ပါတယ်ကွ။
၉-ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါကတော့ ကြောက်စရာကြီးကွ။ မဖြစ်ရင်လည်း နေရော ဖြစ်ရင်လည်း ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်ကွ။ ဘာမှ မဖြစ်ရင်တောင် အပူလောင်တာမကြာခန ဖြစ်တတ်တယ်။
ဘယ်ရောဂါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီတို့ဟာ သဘာဝဓာတ်စာပဲဟေ့။
သူတို့အတွက် သဘာဝအဆောင်ကတော့ သံမဏိပဲကွ။ သံမဏိ လက်စွတ်တို့ သံမဏိလက်ကောက်တို့ ၀တ်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ အဲဒါတွေ မ၀တ်ချင်ရင်တော့ အဆောင်က ကျောက်နီပဲကွ။
သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ကံကောင်းစေတဲ့ နေ့ဟာ အင်္ဂါနေ့ကွ။
ကံကောင်းစေတဲ့ အရောင်ကတော့ ကြက်သွေးရောင် ၊ အနီရောင် ရဲရဲတွေပေါ့ကွာ။
နှလုံးဆိုရင်တော့ တစ်လုံးထဲရအောင် ပေါင်းရမယ်။ ဥပမာ ၁၂-ရက်နေ့ ဆိုရင် ၁-နှင့် ၂ ပေါင်းတော့ ၃-ရတယ်။ အဲဒီတော့ ၃-ဂဏန်း သမားပေါ့။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကမူလ(၉)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
မူလဂဏနျး (၁) ရတဲ့ လူဟာ အသားအရညျက ဖွူဖတျဖွူရျော ရှိတတျ တယျကှ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျလုံး ကိုယျပေါကျက ကွံ့ခိုငျတဲ့ လက်ခဏာ ရှိတယျကှ။ ဆံပငျတို့ ဘာတို့ကတော့ အမြားအားဖွငျ့ အမညျးရောငျ ဖွဈလေ့ ရှိတယျ။ ပွီးတော့ လူအမြားစုနဲ့ မနဘေဲ တဈကိုယျရတေဈကာယ နတေတျတယျကှ။
နောကျတဈခုကတော့ (၁)ဂဏနျးသမားဟာ လူတှကေို မယုံဘူး။ အမွဲတမျး သံသယ ရှိနတေတျတယျ။ တျောတျောမြားမြား (၁)ဂဏနျးသမားတှကေ အာဏာပွတာတို့ အမိနျ့ပေးတာတို့ လုပျလရှေိ့တယျ။ ပွီးတော့ အသဈအဆနျးကို ဖနျတီး လုပျဆောငျတတျတဲ့ ဥဉျလဲရှိတယျ။
အင်ျဂလိပျလ ဘယျလမှာပဲ မှေးမှေး ၁-ရကျ ၁၀-ရကျ ၁၉-ရကျ ၂၈-ရကျတှမှော မှေးရငျ ဂဏနျးဗဒေငျ သဘောအရ ၁-ဂဏနျးသမားလို့ ပွောရမှာပဲ။ ၁- ဂဏနျးသမားဟာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရညျရှယျခကျြတော့ ကွီးတတျတယျကှ။ ဘယျလို အသကျမှေး ဝမျးကွောငျးအလုပျကိုပဲ လုပျလုပျ ၁-ဂဏနျးသမားဟာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အမွငျ့ကို ရောကျသှားတတျတယျ။ ပွီးတော့ ၁-ဂဏနျးသမားအတှကျ အဆောငျဟာ ရှပေဲကှ။
ရှကေို ဆောငျထားရငျ ကံကောငျးတယျလို့ ရှေးက ဆရာတှကေ ယုံကွညျကွတယျ။
အရောငျဆိုရငျတော့ အဝါရောငျတို့ ၊ ရှရေောငျတှဟော ၁-ဂဏနျးသမားနဲ့ သငျ့မွတျတယျ။ ပွီးတော့ ကြောကျမကျြ ရတနာထဲက ဆိုရငျတော့ ပယငျးတို့ ဥဿဖယားတို့ စိနျတို့ဟာ ၁-ဂဏနျးသမား ဆောငျသငျ့တဲ့ ကြောကျမကျြရတနာပဲ။
ပွီးတော့ အရေးကွီးတဲ့ ၁-ဂဏနျးသမားအနနေဲ့ အရေးကွီးတဲ့အလုပျတှေ လုပျရငျ ဘယျလမှာပဲ ဖွဈဖွဈ (၁) (၂) (၄) (၇) (၁၀) (၁၁) (၁၃) (၁၆) (၁၉) (၂၀) (၂၂) (၂၅) (၂၈) (၂၉) (၃၁) ရကျတှဟော သငျ့မွတျတဲ့ ရကျတှပေဲကှ။
ပွီးတော့ ၁-ဂဏနျးသမားတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရောဂါတှဟော နှလုံးသှေးလှတျကွော နှငျ့ ပါတျသကျသောရောဂါ ၊ သှေးလေ မမှနျတဲ့ရောဂါတှေ ဖွဈတတျတယျကှ။
၁-ဂဏနျးသမားအတှကျ အကောငျးဆုံး ဆေးကတော့ ပြားရညျပဲဟေ့။ ပြားရညျကို စားပှဲ ဇှနျးကွီးနဲ့ ညအိပျယာဝငျ တဈဇှနျး တဈဇှနျး သောကျသငျ့တယျကှ….
ဒါကတော့ အဘမငျးသိင်ျခ ပွောပွတဲ့ (၁)ဂဏနျးသမား အကွောငျးပါ။
၃-ရကျနဖှေ့ားဆိုရငျ ၃-ဂဏနျးသမားပေါ့။ ၅-ရကျနဖှေ့ားဆိုရငျ ၅-ဂဏနျးသမားပေါ့။
နှလုံးဆိုရငျတော့ တဈလုံးထဲရအောငျ ပေါငျးရမယျ။ ဥပမာ ၁၂-ရကျနေ့ ဆိုရငျ ၁-နှငျ့ ၂ ပေါငျးတော့ ၃-ရတယျ။ အဲဒီတော့ ၃-ဂဏနျး သမားပေါ့။
ဒီလိုရှိတယျကှ…။ အင်ျဂလိပျလရဲ့ ဘယျလမှာပဲ ဖွဈဖွဈ ၂-ရကျ၊ ၁၁-ရကျ၊ ၂၀-ရကျ ၊ ၂၉-ရကျတှမှော မှေးတဲ့ လူတှကေို ဂဏနျးဗဒေငျ ပညာအရ ၂- ဂဏနျးသမားလို့ ချေါရမှာပဲ။ ဒီလူတှဟော အနုပညာဘကျမှာ ခြှနျတတျတယျ။ စိတျနစေိတျထား သိမျမှတေ့တျတယျ။ အတှေးအချေါ စိတျကူး ကောငျးတတျတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့ စိတျကူးကို အကောငျအထညျ ဖျောဖို့တော့ နှောငျ့နှေးတတျတယျ။ ခရီးသှား ရတဲ့ အလုပျတှမှောလညျး အောငျမွငျ တတျတယျ။ ခရီးတောငျမှ ရလေမျးခရီးနဲ့ ကုနျးလမျးခရီး မတူဘူး။ ရလေမျးခရီးကို ပိုပွီး နှဈသကျတတျတယျ။ သူတို့ ရုပျရညျနဲ့ ပတျသကျလို့ သိသာတာက မကျြနှာဝိုငျးပွီး မကျြခုံး မကျြလုံး ကောငျးတတျတယျ။ ခွဆေံ လကျဆံ ရှညျတတျတယျ။
စကားပွောတဲ့အခါမှာ ပါးစပျတဈခုတညျးက ပွောတတျတာ မဟုတျဘူး။ လကျရော မကျြလုံးရော မကျြခုံးရောပါအောငျ ပွောတတျတယျ။
၂-ဂဏနျးသမားတှအေတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှကေို လုပျတဲ့အခါမှာ အင်ျဂလိပျလ ဘယျလမဆို ၂-ရကျ (၇)ရကျ ၊ (၁၁)ရကျ (၂၀)ရကျ (၂၅)ရကျ (၂၉)ရကျ စတာတှေ ပေါငျးလိုကျရငျ ၂-ဂဏနျးဖွဈနတေဲ့ ရကျတှေ ၇-ဂဏနျးဖွဈနတေဲ့ ရကျတှမှောလုပျသငျ့တယျ။
ဒါပမေယျ့ ၁၆-ရကျကို ပေါငျးလိုကျရငျ ၇-ကနြပေမေယျ့အသုံး မပွုသငျ့ဘူး။ ရှောငျသငျ့တယျ။
နောကျတဈခုက ၂-ဂဏနျးသမားတှဟော အလုပျတှကေို အရမျးလုပျပွီး ခွကေုနျလကျပနျး ကသြှားတဲ့ ရောဂါမြိုး အဆဈအမွဈ ကိုကျခဲတဲ့ ရောဂါမြိုးတှေ ဖွဈတတျတယျ။ ဂဏနျးဗဒေငျစာအုပျတှမှောတော့ ဓာတျစာတှေ အမြားကွီး ညှနျးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈကယျလကျတှေ့ အသုံးဝငျတာကတော့ ရှောကျသီးပဲ။ ညအိပျယာ ဝငျခါနီးတိုငျး စားပှဲဇှနျးနဲ့ တဈဇှနျးတဈဇှနျး သောကျသငျ့တယျ။
၂-ဂဏနျးသမားအတှကျ ကံကောငျးတဲ့ အရောငျကတော့ အဖွူရောငျနဲ့ အစိမျးရောငျတှပေါပဲ။
၂-ဂဏနျးသမား ဝတျဆငျသငျ့တဲ့ ကြောကျမကျြရတနာကတော့ ပုလဲရယျ ၊ မှနျးစတုံးချေါတဲ့ လကြောကျရယျ ဖွဈတယျ။
၂-ဂဏနျးသမားတှဟော ဘယျနရောမှာ ဘယျလို အလုပျမြိုးတှကေို လုပျရလုပျရ သူတို့ရဲ့ လုပျငနျးကို အနုပညာဆနျအောငျ လုပျကိုငျလရှေိ့တယျ။ ပွီးတော့ ၂-ဂဏနျးသမားဟာ ဘဝမှာ အလုပျနှဈခါ ပွောငျးရတတျတယျ။ အိမျထောငျလညျး နှဈဆကျ ဖွဈတတျတယျ။
ဘယျလမှာပဲ ဖွဈဖွဈ ၃-ရကျ၊ ၁၂-ရကျ ၊ ၂၁-ရကျ ၊ ၃၀-ရကျတှမှော မှေးရငျတော့ အဲဒီလူကို ၃-ဂဏနျး သမားလို့ ချေါရမှာပဲ။ သူတို့က မကျြနှာ သှယျ တတျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ မကျြနှာကို ကွညျ့ရငျ အစဉျသဖွငျ့ အေးအေး ဆေးဆေး ရှိတတျ ကွပါတယျ။
ဘယျလိုနရောကို ရောကျရောကျ အဆငျပွအေောငျ နထေိုငျတတျကွတယျ။ သဘာဝ မကအြောငျ ထုပျထားတဲ့ စညျးကမျး ဥပဒတှေကေို တလေးတစား လိုကျနာကွတယျ။ အလုပျ ဝတ်တရား ကိုလညျး အလှနျ ရိုသေ တတျကွတယျ။
သူတို့နဲ့ သငျ့တျောတဲ့ အရောငျ တှကေတော့ ခရမျးရောငျ ၊ မရမျးရောငျ ။ ပနျးနုရောငျတှေ ဖွဈတယျ။
ကြောကျမကျြ ရတနာ ထဲမှာဆိုရငျ ဂျေါမုတျ ကြောကျဟာ ၃-ဂဏနျးသမားနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ ကြောကျပဲ။
၃-ဂဏနျး သမားတှေ အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှေ လုပျဖို့ ကောငျးတဲ့ ရကျတှကေတော့ အင်ျဂလိပျလရဲ့ ၃-ရကျ ၊ ၁၂-ရကျ ၊ ၂၁-ရကျတှဟော ပထမတနျးစား ကံကောငျးတဲ့ နတှေ့ပေဲ။ ၆-ရကျ ၊ ၁၅-ရကျ ၊ ၂၄-ရကျတှဟော ဒုတိယတနျးစား ကံကောငျးတဲ့ နတှေ့ပေါပဲ။
၉-ရကျ ။ ၁၈-ရကျ ။ ၂၇-ရကျတှဟော တတိယတနျးစား ကံကောငျးတဲ့နတှေ့ပေါပဲ။
၃-ဂဏနျးသမားတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရောဂါတှကေတော့ ဦးခေါငျးပိုငျးမှာ အမြားဆုံး ဖွဈတတျတယျ။ ပွီးတော့ အကွောရောငျ ရော၈ါ ၊ အကွောတကျရောဂါ ၊ ဖွဈတတျတယျ။
သူတို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ဓာတျစာကတော့ နာနတျသီး ဖွဈတယျ။ ဒုတိယ သငျ့တျောတာ ကတော့ ဆီးဖွူ သီးဖွဈတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ၃-ဂဏနျး သမားတှဟော နာနတျသီး တဈလှညျ့ ဇီးဖွူသီး တဈလှညျ့ မှနျမှနျကွီး စားစား ပေးသှားဖို့ လိုပါတယျ။
အင်ျဂလိပျလရဲ့ ဘယျလမဆို ၄-ရကျ၊ ၁၃-ရကျ၊ ၂၂-ရကျ၊ ၃၁-ရကျနတှေ့မှော မှေးရငျ ၄-ဂဏနျးသမားလို့ ချေါရမယျ။ သူတို့ရဲ့ မကျြနှာသှငျပွငျဟာ တဈခွားသူ နဲ့ မတူပဲ တမူ ထူးခွားနတေယျ။ ထကျထကျမွကျမွကျ ရှိတဲ့ မကျြနှာမြိုး ရှိတယျ။ ၄-ဂဏနျးသမားတှဟော လှယျလှယျကူကူ မိတျဖှဲ့လို့ မရဘူး။
တဈနညျး တဈဖုံ ခှတီးခှကြ ဖွဈလရှေိ့တယျ။ အမြားတကာနဲ့လညျး အယူအဆခငျြး မတူပဲ တဈမြိုးတဈဖုံ ကှာဟနတေတျတယျ။ စညျးကမျးတှေ အမိနျ့တှကေို မနာခံ တတျဘူး။ (၄)-ဂဏနျး သမားတှဟော မမြှျောလငျ့ပဲ ရတနာပုံ ဆိုကျသလို ကွီးပှား တတျတယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျး ရှိရငျလညျး အနညျးစုပဲ ဖွဈလိမျ့မယျ။ အဲဒီ အနညျးစုကလညျး သူ့အပျေါ အငျမတနျ သစ်စာရှိတဲ့ လူတှေ ဖွဈတတျတယျ။
(၄)-ဂဏနျးသမားတှေ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျကို လုပျမယျဆိုရငျ ၄-ရကျ ။ ၁၃-ရကျ။ ၂၂-ရကျ ၃၁-ရကျတှဟော အကောငျးဆုံးပဲ။
သူတို့အတှကျကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျကတော့ စပျထားတဲ့အရောငျ ။ မီးခိုရောငျ ၊ ညိုမှိုငျးတဲ့အရောငျတှေ ဖွဈတယျ။
ဝတျဆငျသငျ့တဲ့ ရတနာကတော့ နီလာပေါ့ကှာ။
ပွီးတော့ (၄)-ဂဏနျးသမားတှဟော ရောဂါဆနျးတှေ ဖွဈတတျတယျ။ မမွငျရတဲ့ နရောတှမှော အနာဖွဈ တတျတယျကှ။
ရောဂါ ဖွဈလာရငျ လြှပျစဈဓာတျကို အသုံးပွုပွီး ကုသတဲ့ ကုသနညျးဟာ အထူးကောငျးတယျ။ နောကျတဈခုက (၄)ဂဏနျးသမားတှဟော ဆေးစားခွငျး ဆေးသောကျခွငျးထကျ အခြိနျ လုံလုံလောကျလောကျ အနားယူလိုကျခွငျးဟာ ကောငျးတယျ။ ၄-ဂဏနျးသမား နထေိုငျမကောငျး ဖွဈတဲ့အခါ သတျသတျလှတျ စားလိုကျတာနဲ့ ပြောကျကငျး သှားတတျပါတယျ။
အင်ျဂလိပျလ ဘယျလမဆို (၅)ရကျ ၊(၁၄)ရကျ ၊ (၂၃)ရကျ ၊ တဈရကျရကျမှာ မှေး ရငျ ဂဏနျးဗဒေငျ ပညာအရ (၅)ဂဏနျးသမားလို့ ချေါရမှာပဲ။ (၅)ဂဏနျး သမားရဲ့ မကျြနှာ သှငျပွငျကတော့ အစဉျသဖွငျ့ ပွုံးရှငျ နတေတျပါတယျ။ စိတျနေ စိတျထားကိုပွောရရငျ အလှနျ လှုပျရှားလှယျတယျ။ ဘဝကို လြှောကျလှမျးတဲ့ အခါ လောငျးကစားဆနျဆနျ လြှကျေလှမျးတတျပါတယျ။
လောငျးကစားသမား လို့ ပွောတာ မဟုတျဘူးနျော။ စှနျ့စားတာကို ပွောတာ။ အဆုံးအဖွတျ မွနျတယျ။ ဆငျးဆငျးရဲရဲ မနရေတတျဘူး။ လကျဖြားမှာ ငှသေီးနတေဲ့ လူတှဟော မြား သောအားဖွငျ့ (၅)ဂဏနျးသမားတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငှလေညျး မမွဲဘူး။
(၅)ဂဏနျး သမားတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရော၈ါကတော့ အကွောတကျတဲ့ ရောဂါနဲ့ အာရုံကွောနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှေ ပဲ ဖွဈတတျတယျ။
ဂဏနျးဗဒေငျ စာအုပျမှာတော့ ဓာတျစာတှေ အမြားကွီး ပွထားပါတယျ။ (၅)ဂဏနျးသမား အတှကျ တကယျစှမျးတဲ့ ဓာတျစာကတော့ မုနျလာဥပဲ။ မုနျလာဥကို မြားမြား စားပေးပါ။ (၅)ဂဏနျးသမားနဲ့ အလှနျတညျ့ပါတယျ။
သငျ့မွတျတဲ့ အရောငျကတော့ အဖွူရောငျနဲ့ ထုံးကြောကျရောငျ လိုဟာမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့မွတျတဲ့ ရတနာကတော့ စိနျနဲ့ ပလကျတီနမျ ဖွဈတယျ။
(၅)ဂဏနျးသမားတှေ အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှေ လုပျစရာ ရှိရငျ ဘယျလဆို (5,14,23, 1,10, 19,28, 7,16, 25) ရကျတှမှော လုပျသငျ့ပါတယျ။ အကြိုးပေးပါတယျ။
အင်ျဂလိပျလ ဘယျလမဆို ၆-ရကျ ၁၅-ရကျ ၂၄-ရကျ တဈရကျရကျမှာ မှေးရငျ(၆)ဂဏနျးသမားလို့ ချေါနိုငျတယျ။ ၆- ဂဏနျး သမားရဲ့ မကျြနှာသှငျပွငျဟာ စှဲဆောငျနိုငျတဲ့ မကျြနှာမြိုး ဖွဈတတျတယျ။ ဘဝမှာ အခဈြရေးကွောငျ့ အိမျထောငျရေးကွောငျ့ လှမျးဆှေးရတာတှေ တှရေ့တတျတယျ။ အလှအပ ကို နှဈသကျတတျတယျ။
တေးဂီတ ပနျးခြီ ပနျးပု စတာတှကေို နှဈသကျ တတျတယျ။ လေးစားတတျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အနုပညာကို ခံစားတတျတဲ့ သဘောရှိတယျ။ သငျ့တငျ့တဲ့ အရောငျတှကေတော့ အပွာရောငျ အမြိုးမြိုးဟာ အသငျ့တျောဆုံးပဲ။ သငျ့မွတျတဲ့ ကြောကျမကျြရတနာကတော့ မွဟာ အသငျ့မွတျဆုံးပါပဲ။
၆-ဂဏနျး သမားတှေ အဖွဈအမြားဆုံး ရောဂါကတော့ ခေါငျးမူးရောဂါ ၊ နှခေါငျးသှေးလြှံတဲ့ ရောဂါ ၊ အဆုတျနဲ့ ပါတျသကျတဲ့ ရောဂါတှေ ဖွဈပါတယျ။ှ၆-ဏနျးသမားအတှကျ အကောငျးဆုံး ဓာတျစာကတော့ ပဲသီးတောငျ့ပဲ။
၆-ဂဏနျး သမားအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှေ လုပျစရာရှိရငျ (၆၊ ၁၅၊ ၂၄)ရကျတှဟော ပထမတနျးစား ကောငျးတယျ။ (၉၊၁၈၊၂၇)ရကျတှဟော ဒုတိယတနျးစား ကောငျးတယျ။ (၃ ၊ ၁၂ ၊ ၂၁)ရကျတှဟော တတိယတနျးစား အကြိုးပေးတယျ။
အင်ျဂလိပျရကျ ( 7,16,25) ရကျမှာ မှေးထားရငျ (၇)ဂဏနျး သမားလို့ ပွောရမှာ ပေါ့။ (၇)ဂဏနျးသမားတှရေဲ့ ပုံပနျးကတော့ ခပျကွောငျကွောငျ နထေိုငျလေ့ ရှိတယျ။ မသိရငျ စိတျဖောကျပွနျနတေယျလို့တောငျ ထငျရတယျ။ ကိုယျစှမျး ကိုယျစကို ယုံကွညျတယျ။ ထူးထူးဆနျးဆနျး အကွောငျးအရာတှကေို စိတျဝငျ စားတတျတယျ။
ခရီးထှကျခွငျးမှာ မှလြေှ့ျောတတျတယျ။ ဘာသာရေးမှာ အမြားသူငါနှငျ့ မတူပဲ သူ့ ဘာသာသူ တှေးချေါထားတဲ့ ဘာသာရေးမြိူးတှေ ဖွဈနတေတျတယျ။ အျောကာတဈဇငျလို့ ချေါတဲ့ လောကီပညာကို လိုကျစား တတျတယျ။
(၇)ဂဏနျးသမားတှေ အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှေ ရှိရငျတော့ (၇)ရကျနဲ့ (၂၅)ရကျဟာ ပထမတနျး ကောငျးတယျ။
(၂)ရကျ (၁၁)-ရကျ (၂၀)-ရကျတှဟော ဒုတိယတနျးစား ကောငျးတယျ။ အဲဒီရကျတှမှော လုပျပတေော့။
သူတို့အတှကျ ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျတှကေတော့ အစိမျးရောငျ အဖွူရောငျနဲ့ ညိူမှိုငျးတဲ့ အရောငျတှပေဲ ဖွဈတယျ။
သူတို့အတှကျ ကံကောငျးစတေဲ့ ရတနာကတော့ ပုလဲကို ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ။
(၇)ဂဏနျး သမားတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရောဂါကတော့ အလုပျဒဏျ ပိတဲ့ ရောဂါ ၊ ခါးအောကျပိုငျး အကွောတှေ ဆှဲတဲ့ရောဂါ ၊ သှေးစုနာလို အနာကလေးတှေ ဖွဈတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့အတှကျ သငျ့မွတျတဲ့ ဓာတျစာ ကတော့ အရညျရှမျးတဲ့ အသီးအရှကျတှေ ဖွဈတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သင်ျဘောသီးဟာ အသငျ့မွတျဆုံးပါပဲ။
ဘယျလမှာပဲ ဖွဈဖွဈ အင်ျဂလိပျလရဲ့ (8 ,17 26) ရကျတှမှော မှေးတဲ့ သူတှကေို (၈)ဂဏနျးသမားလို့ ချေါတယျကှ။ ၂၆-ဆိုတာလညျး ၂-နဲ ၆-ပေါငျးလိုကျရငျ ၈- မဟုတျလားကှာ။ (8) ဂဏနျးသမားတှဟော စကားပွော ပှငျ့လငျးတယျကှာ။ အလုပျ လုပျစရာရှိရငျလညျး အလုပျကို ဖိလုပျတယျ။ နားစရာ ရှိရငျလညျး ကကြ နန နားတယျကှာ။ ပွောစရာရှိရငျလညျး ဘယျသူ့ကိုမှ အားမနာတတျဘူး။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတော့တာပဲ။ သူ့အတိုငျးကတော့ ညဈလေ့ မရှိဘူးကှ။ သူတဈပါးက ညဈပွီဆိုရငျလညျး ၈-ဂဏနျးသမားဟာ ပွနျပွီး ညဈတတျတယျ။ ၈-ဂဏနျးသမား ညဈရငျ ဘယျလို လူမြိုးမှ လိုကျလို့ မမှီဘူးလေ။ အဲဒီမှာ တဈခု ထူးခွားတာကတော့ ၈-ဂဏနျးသမားဟာ ကံဇာတာ ညံ့ရငျလညျး အလှနျ ညံ့တတျတယျကှ။
ကောငျးရငျလညျး အလှနျ ကောငျးတတျ တယျ။ လူကလညျး တဈဖကျစှနျးပဲကှ။ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရု မစိုကျတတျဘဲ အလုပျတဈခုကို စမိပွီဆိုရငျ ပွီးအောငျ ဇှဲနဲ့ လုပျတာ ၈-ဂဏနျး သမားတှပေဲ။ တဈခါတဈရံ အကွောငျးမဲ့ လောကကွီးကို မကမြေနပျ ဖွဈနေ တာ ၈-ဂဏနျး သမားတှပေဲ။
၈-ဂဏနျးသမားတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရောဂါကတော့ အသညျးရောဂါ ၊ သှေးနဲ့ ပါတျသကျတဲ့ ရောဂါတှပေဲ။ သူရဲ့ ဓာတျစာတှကေတော့ အသီးအရှကျတှေ မုနျလာဥတှေ ငှကျပြောသီးတှဟော သူရဲ့ ဓာတျစာတှပေဲကှ။
ဆောငျရမယျ့ ကြောကျကတော့ ပုလဲနကျ စိနျနကျ မဟူရာ စတဲ့ အနကျရောငျကြောကျတှပေဲ။
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျအရောငျကလညျး ခရမျးရငျ့ရောငျ အပွာရငျ့ရောငျ အထူးသဖွငျ့ အနကျရောငျ ပေါ့ကှာ။
ကံကောငျးစတေဲ့ နကေ့တော့ စနနေပေဲ့ဟေ့။ လောကီပညာ လိုကျစားရငျ ၈-ဂဏနျးသမားတှဟော ထှနျးပေါကျ တတျတယျ။
မှတျခကျြ-ကမ်ဘာကြျော လက်ခဏာဆရာကွီး ကိုငျရိုကမူ ၁၇-ကို ၈-ဂဏနျးဟု မယူဆပဲ ၈-ထကျ ၆ရဲ့ အာနိသငျက ပိုတယျဟု ယူဆပါကွောငျး။
အင်ျဂလိပျလရဲ့ (9 , 18 , 27) ရကျတှမှော မှေးတဲ့ လူတှကေို ၉-ဂဏနျးသမားလို့ ချေါတယျ။ ၉-ဂဏနျး သမားတှဟော သူမြားပေးတဲ့ ငှတေဈဆယျကို မမကျဘူး ကှ။ ကိုယျတိုငျရှာတဲ့ ငှတေဈဆယျကို မွတျနိုးတယျ။ ဘယျကိစ်စကို မဆို ကှယျရာ မှာ တဈမြိုး ရှတေ့ငျမှာ တဈမြိုး မလုပျတတျဘူးကှ။
အဲဒါကွောငျ့ ၉-ဂဏနျး သ မားတှဟော ရနျသူမြားတတျတယျ။ တှဲလို့ ရရငျတှဲ။ တှဲလို့ မရရငျ ကှဲ။ ပွတျပွတျ သားသားရှိတာ ၉-ဂဏနျးသမားတှကှေ။ ၉-ဂဏနျး သမားတှဟော မကွာခဏ လောကကွီးကို စိတျကုနျတတျတယျ။ အဲဒီလို စိတျကုနျပမေယျ့ ၉-ဂဏနျး သမားတှဟော မယျသီလရှငျ ၊ ဘုနျးကွီး ဝတျတာ နညျးတယျကှ။ ၉-ဂဏနျး သမားတှဟော အတိုကျအခိုကျ ဘယျလောကျမြားမြား နောကျဆုံးမှာ အောငျမွငျ သှားတယျ။ ၉-ဂဏနျး သမားတှဟော သူတို့က မသိလို့ကှ။
ကွီးပှားခမျြးသာစတေဲ့ ဓာတျတဈမြိုး မှေးရာပါ ပါတယျကှ။
၉-ဂဏနျးသမားတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရောဂါကတော့ ကွောကျစရာကွီးကှ။ မဖွဈရငျလညျး နရေော ဖွဈရငျလညျး ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါ ဖွဈတတျတယျကှ။ ဘာမှ မဖွဈရငျတောငျ အပူလောငျတာမကွာခန ဖွဈတတျတယျ။
ဘယျရောဂါပဲ ဖွဈဖွဈ ကွကျသှနျဖွူ ကွကျသှနျနီတို့ဟာ သဘာဝဓာတျစာပဲဟေ့။
သူတို့အတှကျ သဘာဝအဆောငျကတော့ သံမဏိပဲကှ။ သံမဏိ လကျစှတျတို့ သံမဏိလကျကောကျတို့ ဝတျရငျ အကောငျးဆုံးပဲ။ အဲဒါတှေ မဝတျခငျြရငျတော့ အဆောငျက ကြောကျနီပဲကှ။
သူတို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ကံကောငျးစတေဲ့ နဟေ့ာ အင်ျဂါနကှေ့။
ကံကောငျးစတေဲ့ အရောငျကတော့ ကွကျသှေးရောငျ ၊ အနီရောငျ ရဲရဲတှပေေါ့ကှာ။
နှလုံးဆိုရငျတော့ တဈလုံးထဲရအောငျ ပေါငျးရမယျ။ ဥပမာ ၁၂-ရကျနေ့ ဆိုရငျ ၁-နှငျ့ ၂ ပေါငျးတော့ ၃-ရတယျ။ အဲဒီတော့ ၃-ဂဏနျး သမားပေါ့။ အခု ကြှနျတျောပွောပွခဲ့တာကမူလ(၉)ဂဏနျးသမား အကွောငျးပါ။
ရွာပြင်ကွင်းမှာ အခြောက်ကြမ်းတဲ့ သရဲ
ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းကို လေ့လာနိုင်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ဘုန်းကြီးကျောင်း
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ၏ အလွန်ဖတ်သင့်သော ဆုံးမစကား
Next Article အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင် ဆားဓာတ်ပါအရည်များ သိုလှောင်ထားသည့် လှောင်ကန်ကြီးတခု တွေ့
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး သရဲအိမ် ( ၇ ) ခု
တမလွန်က သင့်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ပြတဲ့ လက္ခဏာ (၇) ရပ်
Copyright © 2018 DHN NEWS.